သမိုင်း | WikiWon
ထိပ်တန်း5Largest Cities in India
သြဂုတ်လ 17, 20170မှတ်ချက်များ
Introduce: India is one of the largest cities in the world withapopulation of 1,173,108,018 (ဇူလိုင်လ 2010 estimate). Formally it is called as Republic of India and occupies most of the Indian subcontinent in the southern portion of Asia. India is one of the largest democratic country along with China, and of the most fastest growing countries. But is still considered asadeveloping country. Basically India isafascinating country with lots of cities, towns and villages housingagreat diversity ဆက်ဖတ်ရန် [...]
ဥရောပနှင့်တတိယကမ္ဘာစစ် (1953-1968) | Erupean
mujeer မတ်လ 6, 20170မှတ်ချက်များ
Europe and the third world war 1953_1968 By 1953 အမျိုးသားရေးဝါဒ၏တပ်ဖွဲ့များက, အာရှတိုက်တွင်အကြီးအဥရောပအင်ပါယာ၏ပျောက်ဆုံးမှု speeded ခဲ့သော, ထိုဖွံ့ဖြိုးမှုကမ္ဘာ၏အခြားဒေသများမှဖြန့်ခဲ့ကြ. အဲဂုတ္တုပြည်၌အဆိုပါတော်လှန်ရေးအာရပ်လူအမျိုးမျိုးတစ်လျှောက်လုံးအမျိုးသားရေးဝါဒ၏တစ်ဦးထက်ပိုစစ်သွေးကြွနှင့်ပိုပြီးတော်လှန်ရေးပုံစံကို၏လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေတဲ့ဖို့နိဒါနျးခဲ့. အာဖရိကလွန်းခုနှစ်တွင်, မြောက်ပိုင်းနှင့်ဆာဟာရ၏တောင်ပိုင်းနှစ်ခုလုံး, nationalist leaders were emerging who were determined to establish the political independence ဆက်ဖတ်ရန် [...]
ထိပ်တန်းလူကြိုက်အများဆုံးအမေရိကန်ရှေးအကျဆုံးအကောင်းဆုံးစာရေးဆရာ | ကဗျာ | အကောင်းဆုံးနားထောင်ခြင်း
mujeer ဖေဖေါ်ဝါရီလ 9, 20170မှတ်ချက်များ
သောမတ်စ် Stearns Eliot, ဟားဗတ်ကောလိပ်မှာမိမိမျိုးဆက်မဆိုအဓိကအမေရိကန်စာရေးဆရာရဲ့အကောင်းဆုံးပညာရေးရရှိထားသည့်, အဆိုပါ Sorbonne နှင့်အောက်စဖို့တက္ကသိုလ်က, သူကသူ့ poetry.Like သူ့မိတ်ဆွေလွှမ်းမိုးမှုသော Sanskrit နှင့်အရှေ့တိုင်းဒဿနကိုလေ့လာကဗျာဆရာဧဇရပေါင်သူအစောပိုင်းတွင်အင်္ဂလန်သို့ သွား. ထိုအရပ်၌စာပေလောကသားတစ်ဦးမြင့်မားကိန်းဂဏန်းဖြစ်လာခဲ့သည်. One of the most respected poets of his day his modernist seemingly illogical or abstract iconoclastic poetry had revolutionary impact.In The Love ဆက်ဖတ်ရန် [...]
mujeer ဖေဖေါ်ဝါရီလ 3, 20170မှတ်ချက်များ
THE NEW AMERICANS Meet The Newest Americans On October 11 had the privilege of speaking at the naturalization ceremony for 125 new citizens, Held at the United States District Court for the District of Columbia,ashort walk from the Capitol. The ceremony was presided over by the honorable judge Tanya Chukka, herselfanaturalized citizen originally from Jamaica. It drewaremarkable from Kazakhstan to Kenya, from Argentina to Australia, from Iraq to Italy. There men and woman speak dozens of ဆက်ဖတ်ရန် [...]
Bright balloons bob aboveasea of rainbow-colored signs as loudspeakers blare music and announcements and people in hats and shirts emblazoned with slogans hand out fliers stickers and buttons. Election day in the United States often arrives dressed asacarnival,ready to attract attention and excite voter interest. The day begins early on the Tuesday after the first Monday in November in villages,towns and cites across the United States as thousands of volunteers rise before dawn to lendahand ဆက်ဖတ်ရန် [...]
mujeer ဖေဖေါ်ဝါရီလ 3, 2017 742 မှတ်ချက်များ
Among the many freedoms citizens enjoy is the right to vote from wherever they are, life can take you lots of places, And you can vote from all of them. Voting isacitizens's most fundamental right during his election year U.S citizens living away from their voting residence can easily vote by absentee ballot with resources from the federal voting assistance program.(FVAP) FVAP means Federal Voting Assistance Program gov has everything you need to know from upcoming election dates to downloadable ဆက်ဖတ်ရန် [...]